> Resource> iTunes> 3 Ụzọ Iji belata Size nke gị iTunes Library
Wondershare TidyMyMusic maka Mac
Nke a bụ kacha ụzọ chọta niile duplicated songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na dị nnọọ a click. Ihe bụ ihe ọzọ, o nwere ike ịchọta ozi maka ihe niile music gụnyere track ọmụma, album na nkà na lyircs. Mụtakwuo >>
Gịnị bụ nnukwu iTunes n'ọbá akwụkwọ? E nwere abụghị oru kacha n'ọbá akwụkwọ size maka iTunes. Ma ibu na iTunes n'ọbá akwụkwọ size bụ, iji nwayọọ gị iTunes ga-atụgharị. Isiokwu a ga-eso 3 ụzọ iji belata iTunes n'ọbá akwụkwọ size nyak free ohere na-adị n'elu gị iTunes.
Belata size nke music faịlụ
The size nke music faịlụ nwere ike ịdị iche na nke si dị iche iche parameters dị ka bit ọnụego na ọwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị dị ahọ dị ka ụfọdụ music enthusiast, na 192 kbps bit ọnụego bụ ezuru mma. Ya mere, olee iji belata size nke music faịlụ? Lee specifics n'okpuru:
1. mbụ aga iTunes> Mmasị> General> Bubata Ntọala> MP3 Encoder na ịtọ àgwà na-Higher Ogo (192 kbps).
2. Mepụta a Smart Playlist si File> New Smart Playlist.
3. Set "bit ọnụego dị ukwuu karịa 192" dị ka ibiere ịchọpụta niile adịkwa music faịlụ.
4. Họrọ niile music faịlụ site Wụk + A ma ọ bụ na-adọkpụpụta.
5. Right pịa ma họrọ Mepụta MP3 version. Nke a ga-a otutu oge ọ bụrụ na gị music collection dị nnọọ ukwuu.
6. Gaa Library> Music na show duplicates site File> Gosiputa Duplicates.
7. Họchaa site na Bit Rate (Ọ bụrụ na bit ọnụego kọlụm adịghị egosi, nri pịa ọ bụla na kọlụm na họrọ Bit ọnụego. Ị na-atụ aro ikwugharị usoro a na-egosi Size kọlụm ịhụ ókè size na-ebelata maka onye ọ bụla music faịlụ - si 256 ka 192, banyere 3MB - ọ bụla song.)
8. Hichapụ ibu music faịlụ.
Ịnọgide na-enwe Multiple iTunes Libraries
Ịbụ ndabara, gị mgbasa ozi faịlụ, dị ka video, TV na-egosi, music, pọdkastị, na-echekwara na otu iTunes n'ọbá akwụkwọ. Otú ọ dị, i nwere ike sperate ha site na-eke dị iche iche n'ọbá akwụkwọ na-echekwa dị iche iche nke faịlụ. Na ọ bụ dị mfe ka ịgbanwee n'etiti dị iche iche n'ọbá akwụkwọ. Iji mee ya, dị nnọọ jide Option (ma ọ bụ Mgbanwe maka Windows) mgbe amalite iTunes ịhọrọ n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. Mụta ihe banyere iTunes n'ọbá akwụkwọ ebe a.
Hichapụ Duplicates na iTunes
Duplicates na iTunes nwekwara isi ihe mere gị iTunes n'ọbá akwụkwọ buru ibu nke ukwuu. Ka ihichapụ duplicates na iTunes, na-aga Music, Movies, TV na-egosi, wdg na pịa File / Ngosipụta oyiri na-egosi niile oyiri na iTunes. Mgbe ahụ, ewepu ibu ma ọ bụ okenye faịlụ. Lee nkọwa ndị ọzọ banyere esi wepụ duplicates si iTunes n'ọbá akwụkwọ >>.
Olee otú iji belata hà FLV
Olee otú Hichapụ Duplicates si iTunes Library | Wepụ Duplicates
3 Ngwọta n'ihi na-echefu iTunes ndabere Paswọdu
Otú ndabere iPad ka iTunes 12 On Mac na Windows Computers
Olee otú iji weghachi iTunes Library si iPhone
Atụmatụ & Aghụghọ maka Olee otú ndabere iPhone ka Mac
Gịnị bụ iTunes Library?